Posted by ကိုမျိုး at 5:43 AM No comments: Links to this post
ပြဿနာ အခက်အခဲကို အကြောင်းပြုပြီး လူတချို့က ဦးကျိုးကျတယ်။ တချို့ကတော့ စံချိန်တွေ
၀ီလျမ် အာသာ ၀ပ်ဒ်
နားလည်ချင်စိတ် ပြင်းပြဖို့က ပထမ၊ နားလည်အောင် လုပ်ဖို့က ဒုတိယ။
ဘီကာ လူးဝစ် အယ်လန်
Success in getting what you want.
လိုလားတာကိုရဖို့၊ ရတာကို လိုလားဖို့
ကိုယ်လိုချင်တာကိုရရင် အောင်မြင်မှုလို့ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ရတာကို နှစ်သက်နိုင်ရင် ပျော်ရွှင်မှု
အိပ်ခ်ျ၊ ဂျက်ဆင် ဘရောင်း
လုပ်လိုက်ရင် ရမှန်းသိရက်နဲ့ မလုပ်ဘဲနေတာမျိုးမှ ကြံ့ခိုင်တဲ့ တကယ့်စိတ်ဓာတ်။
ဂျူးလီယက် အယ်လစ်ရှာ ဂျားဗစ်
ဖန်ဆင်းရှင်က ကျုပ်တို့ကို ကုပ်ပိုးတစ်ခု ဆင်ယင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်၊တကယ်
အဓိပ္ပါယ်က ကျုပ်တို့ကို သူထမ်းပိုးတင်ချင်လို့ပါ။
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရတယ်ဆိုတာ တစ်ပိုင်းက ပျော်စရာကောင်းသလို၊ တစ်ပိုင်းက
လည်း လက်ရွေးစင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ အသေအကျေ တိုက်ရသလိုပါပဲ။
I would not grant anyone.
And that is the right
ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှ မလိုက်လျောနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်
နဲ့မဆိုင်သလို နေမယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးပါပဲ။
A MAN's character and his garden both reflect the amount of weeding that was done
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ သူစိုက်တဲ့ခြံအကြောင်း သိချင်ရင် စိုက်ပျိုးရာသီအတွင်း
ပေါင်းမထအောင် ဘယ်လောက်ရှင်းနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့သာ ဟပ်ကြည့်။
Posted by ကိုမျိုး at 2:31 AM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 2:26 AM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 6:37 PM No comments: Links to this post